raharaha Saddam: mety ho loza ity finoana ity a!
Maty nahanton'ny tompon'andraikim-panjakana irakiana tamin'ny 30 desambra 2006 teo Andriamatoa Saddam Hussein, izay nofaritana ho "mpanao didy jadona" sy "mpitondra nahavita habibiana", rehefa avy nandalo fitsaràna. Marihina fa io andro namonoana azy io moa dia "fetin'ny ondry" ( jour des moutons ) ho an'ny silamo : izany hoe fahatsiarovana ny namonoan'i Abrahama ondry ho sorona atolotra ho an'i Allah : tantara voarakitra ao amin'ny Korano, sy baiboly izy io.
Hiverina amin'i saddam isika : nahavono "silamo shiita" sy korda maro izy fahavelony, ary nanao ankasoparana maro koa tamin'ireo firenena maro manodidina azy : Kowety, sy Iran. "Silamo sonita" moa ny lehilahy. Ka izany maha-"sonita" hiringiriny azy izany, mazava ho azy, no nitarika azy hanao habibiana maro toy izany, fahavelony. Ireo karazana silamo roa ireo moa, ( ny shiita sy ny sonita no tiko tenenina ), dia vahoaka arabo nifandrafy hatrany hatrizay : nanomboka tamin'ny fotoana nanendrena izay ho solon'ny "Mpaminany Mahomed".
Raha ny toetran'io lehilahy io izany no dinihana dia azo lazaina fa mety ahavitàna zava-dratsy tsy pesipesenina mihitsy ity fifandrafiana ara-pinoana ity. Soa ihany fa, ho antsika Malagasy dia haintsika ny miaina am-pilaminana tsara na dia samy manana ny finoany avy aza ny tsirairay. Asa ... izay tokoa angaha no vokatr'ilay fandalàna ny fihavanana ?!!!
# Posted by tokinao :: Resaka mandalo:: Hametraka hevitra (3) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)